चुनावमा अकल्पनिय झ*ड्का लागेपछि ट्रम्पलाई के भयो ? - Onlines Time
चुनावमा अकल्पनिय झ*ड्का लागेपछि ट्रम्पलाई के भयो ?
November 9, 2020 November 9, 2020 onlinestimeLeaveaComment on चुनावमा अकल्पनिय झ*ड्का लागेपछि ट्रम्पलाई के भयो ?
यही स्वभावका कारण उनलाई मन नपराउने धेरै छन् । उनको व्यक्तीत्वको पुजारी पनि कम छैनन् । उनी सफल व्यावसायी हुन् । उनी अहिले दुनियाको सबैभन्दा धनाढ्यहरुको सूचीमा पर्छन् । हार सजिलो हुदैँन भन्ने उनको भनाई विश्वचर्चित छ । अन्ततः हारेका उनी अब के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कुलमान काे सट्टा विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त
मोटरसाईकल दुर्घट*नामा परी श्रीमान श्रीमतिको एकैचोटी मृ*त्यु